Taliyihii ciidanka booliska ee gobolka Sh/dhexe oo ku geeriyooday weerar Bambaano ah oo caawa lagu qaaday – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Taliyihii ciidanka booliska ee gobolka Sh/dhexe oo ku geeriyooday weerar Bambaano ah oo caawa lagu qaaday
Wararka naga soo gaaraya magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeele ayaa sheegaya in caawa qarax aad u xoogan lagu dilay taliyihii ciidamada booliska ee gobolka Sh/dhexe Khaliif Cabdule Carfaaye.
Qaraxaasi ayaa la sheegayaa inuu ahaa Bam gacmeed lagu tuuray guri uu degan yahay taliyaha geeriyooday ee ku yaala gudaha saldhiga booliska ee magaalada Jowhar, waxaana taliyaha soo gaaray dhaawac culus balse markii dambe u geeriyooday dhaawacaas.
Mas’uul ka tirsan maamulka gobolka Sh/dhexe oo warbaahinta Bulshoweyn la hadlay ayaa u xaqiijiyay geerida taliyaha iyo sidoo kale dhaawaca seddax ruux kale, wuxuuna mas’uulkaasi sidoo kale sheegay in qof kale oo taliyaha la joogay uu isna qaraxa ku geeriyooday.
Kooxihii weerarka geystay ayaa la sheegayaa inay islamarkiiba goobta isaga baxsadeen, waxaana markii uu qaraxa ka dhacay kadib la maqlay rasaas goos-goos ah oo ka dhaceeysay saldhiga weerarka lagu qaaday.
Dhinaca kale, ciidamada nabad-sugidda ee maamulka Hirshabeele ayaa la sheegayaa inay gaareen goobta uu qaraxa ka dhacay, waxayna haatan halkaasi ka wadaan baaritaano aad u xoogan.
Ma jirto cid ilaa iyo haatan sheegatay mas’uuliyadda weerarkaasi ama loo soo qab-qabtay.
Si kastaba oo ay ahaataba, dhawaan ayay ahayd markii magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeele lagu dilay taliyihii ciidanka nabad-sugidda gobolka Sh/dhexe C/wali Ibraahim, waxaana dilka taliyahaasi loo soo qab-qabtay askar badan oo lala xiriirinaayo dilka taliyahaas.